စွန်၊ လင်းတနှင့် အလားတူငှက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
စွန်၊ လင်းတနှင့် အလားတူငှက်များ
စွန်၊ လင်းတနှင့် အလားတူငှက်များ (Accipitriformes) (/ækˈsɪpɪtrɪfɔːrmiːz/) သည် စွန်များ၊ လင်းယုန်များ၊ လင်းတများပါဝင်သော မျိုးရင်း Accipitridae တွင်ပါဝင်သည့် မျိုးတူ ငှက်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် မျိုးစဉ် အဆင့် တိရစ္ဆာန် အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
↑ Mayr G, Smith T. A diverse bird assemblage from the Ypresian of Belgium furthers knowledge of early Eocene avifaunas of the North Sea Basin. N Jb Geol Paläontol, Abh. 2019;291:253–281. doi: 10.1127/njgpa/2019/0801.
↑ "Biologia Futura: rapid diversification and behavioural adaptation of birds in response to Oligocene–Miocene climatic conditions" (2020). Biologia Futura 71 (1–2): 109–121. doi:10.1007/s42977-020-00013-9.
↑ Cramp 1980, pp. 3,277.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စွန်၊_လင်းတနှင့်_အလားတူငှက်များ&oldid=710623" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။